Man United & Chelsea Oo U Soo Baxay Champions League, Liverpool & Arsenal Oo Guul Xili Ciyaareedka Ku Xidhay Iyo Natiijooyinka Kulamadii 38-Aad Oo Dhamaystiran. - Gool24.Net
Man United & Chelsea Oo U Soo Baxay Champions League, Liverpool & Arsenal Oo Guul Xili Ciyaareedka Ku Xidhay Iyo Natiijooyinka Kulamadii 38-Aad Oo Dhamaystiran.
Waxaa gabi ahaanba la soo gaba gabeeyay xili ciyaareedkii Premier League ee 2019/2020 waxaana kulamadii 38 aad ee halka mar la wada bilaabay ka soo baxay natiijooyin saamayn layaableh ku yeeshay tartamada Yurub iyo kaalmaha horyaalka heerka labaad loogu dhacayo.
Kooxaha Manchester United iyo Chelsea ayaa u soo baxay tartanka xiisaha badan ee Champions League waxaana murugo ku hadhay Leicester City oo intii aanu karoonuhu xili ciyaareedka joojin kaalinta saddexaad dhibco fiican ugu jirtay.
Chelsea ayaa meel iska saartay Wolves halka Man United ay booskeeda si rasmi ah uga riixatay Leicester City waxayna ahaayeen kulamada ugu xiisaha badan ee maalinta xili ciyaareedka ugu danbeeyay.
kooxda koopa Premier League ku guulaysatay ee Liverpool ayaa guul soo laabasho ah ku dubatay Necastle United oo gool ku hor martay waxayna Reds xili ciyaareedka ku soo xidhatay guul iyada oo 99 dhibcood heshay.
45 kii daqiiqo ee qaybtii hore ee ciyaarta ayaa ku dhamaaday barbaro gool la’aan ah laakiin Chelsea ayaa samaysay mucjiso layaableh intii lagu jiray dhawr daqiiqo oo ciyaarta lagu daray waxayna Blues waqtigii nasashada abuuratay jawi aanla rumaysan karin.
DAQIIQADII 45+1 Chelsea ayaa la timid goolkeeda ay Wolves wadnaha ku jartay wuxuuna ahaa gool cajiib ah oo ka yimid da’yarka saamaynta badan ee Mason Maunt kaas oo jamaahiirta kooxdiisa iyo Frank Lampard neefta ka soo saaray wuxuuna Mount ciyaarta ka dhigay 1-0 ay Blues hogaanka kula wareegtay.
DAQIIQADII 45+4 Alla maxay waali ahayd! Olivier Giroud ayaa Chelsea u keenay goolka labaad ee ay sida layaabka leh ula timid dhamaadka qaybtii hore waxaana caawinta goolkan sameeyay da’yarkii Wolves dalooliyay ee Mason Mount.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 2-0 ay Chelsea si layaableh hogaanka ugu qabtay, waxayna ciyaartoyda Blues garoonka ka baxeen iyaga oo ogaaday in Man United iyo Leicester City oo ay tartamayeen ay barbaro gool la’aan ah nasashadii ku baxeen.
Wolves ayaa gabi ahaanba ku fashilantay in ay soo laabasho samayso waxayna taasi Blues ka caawisay in ay guul 2-0 ah soo gaadhay waxayna Blues kaalinta afraad kaga soo baxay Premier League iyada oo Blues xaqiijisatay booskeeda Champions league.
TAARIIKH: Man United ayaa lagu abaal mariyay rekoodhihii 14 aad ee xili ciayareedka Premier league waana tiradii rekoodhayaal ee abid hal koox oo Premeir League ah lagu abaal mariyay.
Dhamaadkii ciyaarta waxaa kaadhka cas loo taagay difaaca Leicester City ee Jonny Evans laakiin ilbidhiqsiyadii ugu danbeeyay Jesse Lingard ayaa niyadjabka Leicester City is raaciyay wuxuuna dhaliyay goolka labaad waxayna ciyaartu ku dhamaatay 2-0 ay Man United ku garaacday Leicester City waxayna sidaa United kaalinta saddexaad ugaga soo baxay Champions league.
Jurgen Klopp ayaa gab ahaanba ku soo shir tagay shax weerar cusub leh isaga oo aan shaxdiisa ku soo bilaabin ciyaartoydii koobka Premier league ka soo caawiyay ee Mohamed Salah, Sadio Mane iyo Roberto Firmino.
DAQIIQADII 1 AAD Newcastle United ayaa si layaableh ciyaarta ugu bilaabtay kadib markii uu D. Gayle dhaliyay goolka furitaanka oo 30 ilbidhiqsi oo kaliya qaatay wuxuuna ahaa goolkii ugu deg dega badnaa ee xili ciyaareedkan Liverpool laga dhaliyay.
D. Gayle ayaa goolkan ku dhaliyay kubbad caawin uu ka helay xidigii hore ee Liverpool ee Shelvey waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay Newcastle United hogaanka kula wareegtay.
DAQIIQADII 38 AAD Liverpool ayaa ciyaarta dib ugu soo laabtay kadib markii uu difaaca dhexe ee Virgil Van Dijk uu ka faa’iidaystay kubbad caawin uu ka helay Oxlade-Chamberlain isla markaana uu kooxdiisa Reds u dhaliyay goolka barbaraha.
Liverpool oo inta badan kubbada maamulaysay ayaa qaybtii hore ku fashilantay in ay wax goolal kale ah dhaliso waxaana lagu kala nastay barbaro 1-1 ah.
DAQIIQADII 59 AAD Liverpool ayaa gabi ahaanba natiijada ciyaarta dhinaca kale u dhigtay kadib markii uu Origi dhaliyay gool cajiib ah isaga oo kubbad ka helay Robertson laakiin qaabka uu Origi uga yaabaday goolhaye Dubravka ayaa noqotay mid cajiib ahayd waxayna ciyaartu noqotay 2-1 ay Reds hogaanka ku qabtay.
Daqiiqadii 64 aad Klopp ayaa ciyaarta soo galiyay Mohamed Salah, Robeerto Firmino iyo Sadio Mane wuxuuna saaray Origi, Minamino iyo Oxlade-Chamberlain.
DAQIIQADII 89 AAD Sadio Mane ayaa sii kordhiyay dagaalkiisa abaal marinta xidiga sanadka ee premeir League ugu fiican wuxuuna dhaliyay goolka saddexaad ee ay Liverpool sida rasmiga ah ugu xaqiijisatay guusha ay xili ciyaareedkan ku soo xidhatay.
Sadio Mane ayaa goolkan ku dhaliyay kubbad caawin uu ka helay saaxiibkiisa ay kaydka ka soo wada baxeen ee Roberto Firmino waxayna ciyaartu noqotay 3-1 ay Reds ciyaarta hogaankeeda ugu dheeraysatay.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3-1 ay Reds guul soo laabasho cajiib ah ugu dubatay Newcastle United waxayna Reds xili ciyaareedka ku soo xidhatay guul ay ku gaadhay 99 dhibcood oo Premier League ah.
Arsenal ayaa shaqadeeda qabsatay qaybtii hore ee ciyaarta waxayna saddex gool ugu qubeeyeen kooxda Watford iyada oo Aubameyang uu helay fursadihii uu doonayay si uu maalinta xili ciyaareedka ugu danbaysay u sii laba jibaaro difaacashada kabta dahabka ah.
Daqiiqadii 5 aad Aubameyang ayaa daah furay goolasha Arsenal wuxuuna xaalad xun ku abuuray kooxda martida ahayd ee Watford isaga oo ciyaarta ka dhigay 1-0 ay Gunners xili horeba ay Arsenal hogaanka kula wareegtay.
Daqiiqadii 24 aad Arsenal ayaa heshay goolkeeda labaad waxaana goolkan u saxiixay xidiga saamaynta cusub la soo baxay markii uu fursada buuxda helay ee Kieran Tierney waxayna ciyaartu noqotay 2-0 ay Arsenal hogaanka ku dheeraysatay.
Daqiiqadii 33 aad Arsenal ayaa keensatay goolkeeda saddexaad waxaana goolkiisa labaad ee kulankan oo rekoodhe ahaa dhaliyay Aubameyang kaas oo natiijada ciyaarta ka dhigay 3-0 ay Gunners ku dubanayso Watford.
TAARIIKH MADOW: David Luiz ayaa noqoday difaacii ugu horeeyay taariikhda Premier League ee hal xili ciyaareed lagu dhigay 5 rekoodhe kadib markii uu Watford siiyay fursada gool ku laad loogu dhigay waxaana rekoodhahan gool ku dhaliyay Troy Deeney daqiiqadii 43 aad ee dhamaadkii qaybtii hore.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 3-1 ay Arsenal laba gool hogaanka ku haysay laakiin Watford ayaa wali raadinaysay sidii ay ciyaarta wax uga heli lahayd.
Daqiiqadii 66 aad ee qaybtii labaad xidigii hore ee Arsenal ee Danny Welbeck ayaa Watford u keenay goolka labaad ee ay rajadooda ku soo nooeeyeen waxayna ciyaartu noqotay 3-2 ay hogaankii Gunners ee saddexda gool ahaa hal gool lagu soo yareeyay.
Watford ayaa dhamaadkii ciyaarta raadinaysay goolka barbaraha laakiin Gunners ayaan guusha faraha ka qaadin waxayna ciyaartu ku dhamaatay 3-2 ay Arsenal ku garaacday Watford.
Kooxaha Heerka labaad U Dhacay:
Kooxaha Watford iyo Bournemouth ayaa ku biiray Norwich City waxayna saddexdan kooxood noqdeen kooxaha horyaalka heerka labaad u dhacay waxaana badbaaday kooxaha Aston Villa iyo West Ham United oo kulan xiiso badan dhexdooda ka ciyaaray.
Kala saraynta Premier League ee kama danbaysta ah
Natiijooyinka Kulamadii 38 aad oo dhan: